H2H – ပြျောရှငျစရာအခြိနျလေးမြားကိုပိုငျဆိုငျစဖေို့ h2h
$74000 လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကို ကျင်းပပေးမယ့် Jang Geun Suk ရဲ့ပရိတ်သတ်များ Jang Geun Suk ရဲ့ပရိတ်သတ်အဖွဲ့ Eels သည် သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် သရုပ်ဆောင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကို ဆင်နွဲဖို့ စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ကနေ့ ၃ရက်နေ့ထိ ဓါတ်ပုံပြပွဲတစ်ခု ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒါက...
The Great Ocean Migration လို့ အမည်ရတဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ ငလိပ်ကျောက်အုပ်ကြီး သွားလာနေတာကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီပုံလေးဟာ ကမ္ဘာကျော်ပုံတစ်ပုံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ Trolltunga လို့ ခေါ်တဲ့ Norway မှ နာမည်ကျော် ကျောက်ဆောင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အရမ်းကြီး မမြင့်ပါဘူး။...
ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အများဆုံး ငါး (၁၀) မျိုး ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ငါးထွက်ကုန်အစားအသောက်တွေကို အများစု စားသုံးကြပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ရေချို၊ ရေငန်တွေမှာ ငါးမျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော်ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို ငါးမျိုးစိတ် ၃ သောင်းကျော်ထဲမှာမှ အံ့မခန်းဖွယ်ရာ လှပတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေ အများကြီးရှိကြပေမဲ့ ကြောက်စရာကောင်းပြီး အန္တရာယ်များတဲ့ တခြား...
ကမ္ဘာပေါ်မှ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာများ The Great Ocean Migration လို့ အမည်ရတဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ ငလိပ်ကျောက်အုပ်ကြီး သွားလာနေတာကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီပုံလေးဟာ ကမ္ဘာကျော်ပုံတစ်ပုံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ Trolltunga လို့ ခေါ်တဲ့ Norway မှ နာမည်ကျော် ကျောက်ဆောင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့...
ပိန်းပါးပါးဖြစ်ပေမဲ့ ခါးမှာ အဆီတွေစုနေလို့ ကိုယ်ကပ်အိင်္ကျီတွေဝတ်ရမှာ ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေလား။ အမြင်မတော်တဲ့ ၀မ်းဗိုက်ကအဆီတွေကို သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ဖယ်ရှားလိုက်ရအောင်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်း ရေ ၈၀၀ မီလီလီတာ (၀.၈ လီတာ) သစ်ကြံပိုးခေါက် ၁ ချောင်း ကရဝေးရွက် ၃ ရွက် လက်ဖက်စိမ်း (Green Tea)...
မြန်မာ အနောက်တောင်ဖက် ရန်ကုန်မှ ထောင့်ဖြတ်တိုင်းပါက420 ကီလိုမီတာ ရှိပြီး ရှေ့ တန်းအကျဆုံးကွန်းစုဖြစ်ပါတယ်သူ့ ရဲ့ တောင်ဖက်မှာက အက်ဒမန်းကျွန်းစုရှိပြီး ကီလိုမီတာ 60ပဲဝေးတာပါ အန္ဒိယ ပိုင်ဖြစ်ပြီး စစ်အခြေစိုက်စခန်း ချထားပါပြီတောင်မြောက် အရှည် ၁၂ ကီလိုမီတာရှိပြီး ရှေ့နောက်ကတော့ ၁’ ၇...
လူတွေဟာ အများအားဖြင့် လူပုံအလယ်မှာစကားပြောရတာကို သေမှာထက်ပိုကြောက်ကြသလား? လေ့လာမှုတွေရဲ့အဆိုအရ လူတွေရဲ့နံပါတ်တစ် အကြောက်ဆုံးအရာမှာ လူပုံအလယ်မှာ စကားပြောရခြင်းဖြစ်ပြီး သေခြင်းကတော့နံပါတ်နှစ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ပျှမ်းမျှလူတွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး Jerry Seinfeld ဆိုတဲ့စိတ်ပညာရှင်က ” မင်းဟာ အသုဘတစ်ခုကို သွားခဲ့ရင် လူပုံအလယ်မှာ ချီးကြူးထောပနာစကားပြောဖို့ထက် မင်းကို အခေါင်းထဲမှာပိတ်ထားတာက...
ချစ်ခြင်းအတွက် တော်ဝင်အဆင့်အတန်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်သူ ဂျပန်မင်းသမီး မာကို သင့်ဘ၀ရဲ့ချစ်ခြင်းအတွက် သင်ဘာကို စွန့်လွှတ်မှာလဲ? သင့်အိမ်လား? သင့်မိသားစုလား? သင့်အလုပ်လား? သင်သည် ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုမှာ နေထိုင်ဖို့ နဲ့ သင်တို့ရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀ကို တွေ့ကြုံခံစားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါမလား? သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်က အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကို သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှာလား?...
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့မှ မနက်ခင်းလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ချိန်တွင် တွေ့ရမည့် မြင်ကွင်းများ (China,Beijing က ကားတန်းကြီး) သင့်မျက်စိတစ်ဆုံးမကအောင် ရှည်းလျားစွာ ပိတ်ဆို့နေပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ချိန်ထက် အနည်းဆုံး သုံးနာရီစောထရပါမယ်… (Bangladesh,Dhaka မှ လန်ချားဆိုက်ကားလေးများ) ဖြည်းဖြည်းခြင်းတရွေ့ရွေ့တော့ သွားနေမှာပါ။ အိပ်လိုက်လို့ရတယ့်အတွက် အစဉ်ပြေမှာပါ… (Italy,Venice မှ လှေကလေးများ) ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတယ့်...
မင်းလှခံတပ်အကြောင်း မင်းလှခံတပ်သည်မင်းလှမြို့ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းထိပ် တွင် တည်ရှိပြီးလျှင် လေးထောင့်စတုရန်းသဏ္ဌာန် ဆင်ဆင်ရှိ သည်။ မင်းလှခံတပ်မှာ မြေကြီးပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ခံတပ်ဖြစ်၍ မြစ်တစ်ဖက် ကမ်းတွင်ရှိသော ဂွေးချောင်းခံတပ်မှာ မြေတွင်းခံတပ် ဖြစ်လေသည်။ ဤခံတပ်၂ ခုစလုံးကို သက္ကရာဇ် ၁၂၂၂-၂၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်၍ ၁၂၂၅ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့၏။...
အခုတလော မြတ်စွာဘုရားပုံတော် ဆင်းတုတော်တွေကို ဖိုတိုရှော့ပ်နဲ့ တောင်ထိပ်တင်လိုက်၊ ရေထဲချလိုက်၊ တောထဲပို့လိုက် ရောင်ခြည်တော် ဆိုပြီး အလင်းတွေ လုပ်လိုက်၊မြွေပတ်လိုက်…. စသည်ဖြင့် လုပ်ချင်ရာ ထင်ရာလုပ်နေကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကြိုက်တယ်ဆို like လုပ်ပါ ၊ share လုပ်ပါ။ဒီပုံတော်ဖူးသူတွေ ပွားများသူတွေ ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် ဆိုကာ...